Netflix Australia iri kuwedzera zvimwe zvinotonhorera zvakanyanya vhiki ino - Techip RELAY
6 points à retenir du débat démocratique en Caroline du Sud…
Nzou: Sébastien Desabre yakaziviswa muAbidjan
Kate Middleton anotaridzika zvakanyanya chic paanojoinha ...
Netflix ndizvo zvakapusa kurasa boka remafirimu mwedzi uno, kusanganisira chaiyo fide classics senge vertige, Vakashamisika uye vakavhiringidzika et Shakespeare murudo (Shut up, ini ndinoda izvozvo.) Asi izvo zvishoma zvinomiririra izvozvo nezvimwe zvakanyatsonakidza zvekuwedzera vhiki ino. Heino rondedzero izere.
Netflix inowedzera matani emabhaisikopo matsva nematerevhizheni eTV kuraibhurari yayo mwedzi wega wega. Isu tatonyora zvese zviri kuitika paNetflix mwedzi uno - asi kuparadzanisa matombo akakosha kubva mukutadza kubhokisi bhokisi kunogona kunge kuri kunyengera.
Netflix Australia inobvisa (zvakare) boka remavhidhiyo anodikanwa
Netflix iri kuchenesa imba zvakare. Pamazuva mashoma anotevera, boka rezvinhu rakabvumidzwa richasiya basa, pamwe risingazombodzoka. Izvi zvinosanganisira kunamatira kwekunamata seDazed uye Yakavhiringidzwa, Icho Chitsuwa, Kuku Runhidza, Tinker Tailor Soldier Spy, Vertigo uye Sausage Party. Hezvino zvese izvo zvichabviswa.
Kuti uchengetedze dambudziko, tasarudza mabhaisikopo akanakisisa nemitambo yeTV ichangobva kuwedzerwa kana kusaridzwa kuti aoneke mumazuva anotevera. Iko kuongorora kwevhiki yako yakarongedzwa!
Original Nepflix mafirimu
Kune vakomana vese: PS Ndichiri kukuda (kutenderera izvozvi)
(yakabatanidzwa) https://www.youtube.com/watch?v=JUmZ3NfiHDI (/ yakabatanidzwa)
Iri gore nyowani uye Lara Jean naPeter havachade kuti vari muhukama. Ivo vari muukama. Uye, saLara Jean parinofamba nemugodhi wepamutemo wekutanga naPeter - kutsvoda kwake kwekutanga, zuva rake rekutanga, Zuva raValentine rekutanga - anozviwana achisendama zvakanyanya paKitchen naMargot, Chris uye newakavanzika mutsva waanga asingafungiri, Stormy, kumubatsira kubata zvakadzama manzwiro anoperekedza ichi chitsauko chekuyera hukama uye kuwana iye chaiye wega. Asi apo John Ambrose, mumwe anogamuchira imwe yetsamba dzerudo dzeLara Jean, anodzoka kuhupenyu hwake, anofanira kunyanya kuzvitarisira iye paari kutarisana nedambudziko rake rekutanga: musikana anogona kudanana nevakomana vaviri panguva imwe chete here?
Vanga vasingakwanise kuve vakasiyana: Isi (20) mukunda wemabhiridha anobva kumusoro Weidelberg muvakidzani, Ossi (23) anogara muguta raanoshanda-kirasi reMannheim, akarerwa naamai vake varombo vasina murume mukuomerwa. Asi apo Isi anosangana na Ossi, vaviri vacho vanokurumidza kuona kuti vanogona kubatsirana kubva kune mumwe nemumwe: Isi anoda Ossi kumutsa vabereki vake zvakanyanya uye kuti avape mari yake yekurota yaanoda yekuve chef - Ossi inoda. mari kubva kuIsi kuti ibhadhare mutambo wetsiva. Icho chinoratidzika sechirongwa chakasimba munguva pfupi chinoshanduka kuita nyonganiso yemanzwiro…
Netflix TV inoratidza
Narcos: Mexico: Mwaka wechipiri (kutenderera izvozvi)
(yakabatanidzwa) https://www.youtube.com/watch?v=DgJYcmHBTjc (/ yakabatanidzwa)
Félix anofanirwa kutarisana neUnited States uye mhedzisiro yezviito zvake zvinopesana neECA kumeso kwekusagutsikana mukati mekambani yake.
Cable Vasikana: mwaka wadarika (14/2/2020)
Lidia anodzokera kuSpain kundoyedza kuwana mwanasikana wake achibatsirwa neshamwari dzake dzepedyo, apo vese vari kunetsana nemhedzisiro yehondo yevagari.
Rudo ibofu (kuyerera izvozvi)
(yakabatanidzwa) https://www.youtube.com/watch?v=s2eBAFt3L_0 (/ yakabatanidzwa)
MuRudo Mhofu, vaimbi vanoda kudiwa ivo zvavari ivo vachasarudza mumwe munhu wekuroora kana kumbobvira waonana navo. Kwemavhiki mana anotevera, ivo vanobva vafamba pamwe, kuronga muchato wavo, uye kuyedza kuwedzera chisungo chemuviri pakusungwa kwavo kwepamoyo. Kana zuva ravo remuchato rasvika, vanozoroora munhu wavakadanana naye zvakapofumara here? Kana kuti zviitiko zvepanyama uye zvekunze zvakazvikanganisa?
Vaviri veanemasimba uye vakabudirira magweta vanozviwana vachidzivirira izvo zvinopesana nezvido zvemitemo, izvo zvinoisa wanano yavo inofara muyedzo.
American Pie inopa: bhuku rerudo (14/2/2020)
Makore gumi mushure mefirimu yekutanga yeAmerican Pie, mhandara nhatu nyadzi dzakawana Bhaibheri rakavanzika muraibhurari yechikoro kuEast Great Falls High.
Theron of Riddick (14/2/2020)
(yakabatanidzwa) https://www.youtube.com/watch?v=FIfuRJ08QnY (/ yakabatanidzwa)
Iye tsotsi waida Richard Bruno Riddick (Vin Diesel) anosvika papuraneti anonzi Helion Prime uye anozviwana atarisana nehumambo hunopinda hunodaidzwa kuti Necromongers, uto rinoronga kushandura kana kuuraya vanhu vese vari muchadenga.
Ini izvozvi ndati iwe Chuck naLarry (14/2/2020)
Vaviri vanodzimira moto veBrooklyn vanonyepedzera kuva vaviri ngochani kuti vafarire zvakanakira mumwe wako wepamba.
(yakabatanidzwa) https://www.youtube.com/watch?v=ayTnvVpj9t4 (/ yakabatanidzwa)
Mupurisa weLondon akadzidziswa anoendeswa kuguta diki rine chakavanzika cherima.
Mukadzi wechidiki anofarira zvekunakidza anokwezva kutarisa kwekunaka kwakanaka mune ino mimhanzi kupemberera kwerudo, shamwari uye mafambiro.
Hupenyu hwemutengesi wemabhuku akareruka anochinja kana asangana nemukurumbira wemuvhi nyeredzi munyika.
Hug mamiriro (14/2/2020)
(yakabatanidzwa) https://www.youtube.com/watch?v=M2FQLRu85rE (/ yakabatanidzwa)
Kana munhu ane ruzivo nezvebonde anorara nemukomana ane rookie, anokurumidza kuona kuti hukama hwehukama hahugutsi zvachose.
Panipat - Kutengesa kukuru (14/2/2020)
MuIndia yezana ramakore rechi XNUMX, mukuru waMaratha anotungamira uto rake mukugadzirira kurwa kunotyisa nevanorwisa veAfghan mune iyi firimu yakavakirwa pazviitiko chaizvo.
Kana muimbi weLas Vegas akachinja kuita chitupa chinonzi Buddy Israel achifunga kushandura chiratidzo chehurumende uye kupupurira mhomho, zvinoita sekunge vanhu vazhinji vangada kuve nechokwadi kuti haafeme.
Heist Tower (14/2/2020)
Kana boka revarume vanoshanda nesimba rikaona kuti vanga vari vanhu vehupfumi hwavanoshandira Ponzi scheme, vanorangana kuba kuba kwake kwakakwira.
(yakabatanidzwa) https://www.youtube.com/watch?v=3TLYO2I5kgw (/ yakabatanidzwa)
MuBritain inotungamirwa neBritain, murwi wechidiki wechiRoma anoedza kukudza ndangariro yababa vake nekuwana chiratidzo chegoridhe chegumbo rake rakarasika.
Zuva Asingagumi reMweya Asiri (14/2/2020)
(yakabatanidzwa) https://www.youtube.com/watch?v=07-QBnEkgXU (/ yakabatanidzwa)
Kana hukama hwavo huchiva hunotapira, vaviri vanoenda kunzira yekurapa kuti vadzimiswe kubva mundangariro dzavo.
Anorambwa hockey mutambi anoisa hunyanzvi hwake kushumiro yegorofu kuti aponese imba yasekuru vake.
Evan Wemasimbaose (14/2/2020)
Mwari vanotaura neCongressman Evan Baxter uye vanomuudza kuti avake arch mukugadzirira mafashama makuru.
Nhanho Pamusoro: Shanduko (14/2/2020)
Emily anosvika muMiami nechishuwo chekuve nyanzvi yekutamba. Anopopota naSean, mutungamiri wechikwata chekutamba uyo waanogara naye anotyisidzirwa nehurongwa hwebudiriro hwababa vaEmily.
Vana uye Anime
Kapteni Underpants Epic Sarudzo-o-Rama (kutenderera izvozvi)
Mune ino inyanzvi inofambidzana, Harold naGeorge vanoda hunyanzvi hwekuita sarudzo kudzivirira Krupp kubva pakuputika muti wavo unodikanwa wemuti.
Dhiragi Tsvaga Nyaya Yako (kutenderera zvino)
Iyo nyaya inotanga nemukomana mudiki anonzi Dai .. Dai, wechidiki protagonist weiyo nhepfenyuro, ndiye chete munhu aripo achigara pachitsuwa ichi. Sezvo arerwa naBrass uye neshamwari yake yepamoyo, monster Gome, Dai akakura achirota kuva gamba.
Nyaya iyi yakatanga kutanga https://www.lifehacker.com.au/2020/02/new-on-netflix-the-best-movies-and-tv-shows-released-this-weekend-2/
TELES RELAY 25539 Posts 0 mashoko
Kudzidza kunonyevera zvimwe zvepabonde zvinogona kureva mukana wepamusoro wekenza
6 matora kubva pagakava rezvegutsaruzhinji muSouth Carolina - New York Times
Algeria: Kutongwa kwemwanakomana waPresident Tebboune kunotanga - Jeune Afrique